Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/boka.mg.naj
Proverb Ahafahana vao mihavesatra toy ny tongo-boka. [Veyrières 1913 #1943]
Proverb Alao izay ho anao : boka sa tandomerina. [Veyrières 1913 #835]
Proverb Aza manao toy ny boka manjono, ka mifamitaka samy malama. [Cousins 1871 #523]
Proverb Boka homan-jabora ka ny tanany no mandina aloha. [Rinara 1974]
Proverb Boka Ikala tsy leon' , ary boka Ikoto tsy leon' . [Rinara 1974]
Proverb Bokalahy lavo amin-karavola: ka kibo no enti-manarina. [Houlder 1895 #2029]
Proverb Boka lavo amin-antsoro : raha misy fivoy, dia lakana. [Veyrières 1913 #1948, Cousins 1871 #775]
Proverb Boka lavo amin-tsihivitrana ka nambakain' ny hohony. [Rinara 1974 #909]
Proverb Boka lavo an-tsihivitrana : indray mitsinkasina ihany. [Veyrières 1913 #1951, Cousins 1871]
Proverb Boka lavon' antsoro : any an-dohasaha vao mifanatrika. [Veyrières 1913 #1953, Cousins 1871 #779]
Proverb Boka mangala--boatavo : any an-kandemponana vao mifampiandry. [Rinara 1974 #912]
Proverb Boka manonton-tsoka ka mandrenesa ry izy ato anatiny ato. [Rinara 1974 #913]
Proverb Boka mararin' ny nendra, ka mafimafy kokoa noho ny teo. [Veyrières 1913 #1959, Cousins 1871 #784]
French interpretation Les malades atteints de la petite vérole étaient comme les lépreux, rejetés de la société. Le proverbe signifiait: malheur sur malheur. [Veyrières 1913 #1959]
Proverb Boka matin' ny nendra : efa ratsy hatramin' izay niandohany. [Rinara 1974 #914]
Proverb Boka matin' ny nendra : indroa manalavitra ny fasan-drazana. [Veyrières 1913 #1960, Cousins 1871 #786]
Proverb Boka maty : tsy misy mpiantra. [Veyrières 1913 #1961, Cousins 1871 #785]
Proverb Boka mifandromba-kena : misarika ihany fa tsy mitondra. [Veyrières 1913 #1964, Rinara 1974 #916, Cousins 1871]
Proverb Boka mihalotra : manosika azy hody. [Cousins 1871 #790]
Proverb Boka misambo-balala : mamely totohondry ny tany. [Veyrières 1913 #1971, Cousins 1871 #795]
Proverb Boka misambo-balala: mamotsitra ny taovany. [Veyrières 1913 #1972, Cousins 1871 #795]
Proverb Boka misy mpisaotra : tao ihany, fa navoakany. [Veyrières 1913 #1367, Cousins 1871]
Proverb Boka mitohy rofia ka manasaritaka ny efa milamina. [Houlder 1895 #2015, Rinara 1974 #925]
Proverb Boka nandamaka taninketsa : ka ny mamono dia no ventin-draharaha. [Rinara 1974]
Proverb Boka nandamaka taninketsa : ny mandamaka leo ihany, fa ny mamono dia no tsy tanty. [Veyrières 1913 #1980, Cousins 1871]
Proverb Boka nandray tanana, ka ny fanahy misy ihany fa ny tanan-kandray no tsy misy. [Rinara 1974]
Proverb Boka nempahina ka na sitrana aza narahin-kolatra ihany. [Rinara 1974 #940]
Proverb Boka nievina ka afa-drofy am-pirariana fa nivindina ihany. [Rinara 1974 #941]
Proverb Boka rara-boasary, ka ny any ny tena ihany, ka anambazan-kisasahana. [Cousins 1871]
Proverb Boka rara-tsifotra, ka ny an' ny tena ihany no ananan-doza. [Rinara 1974 #947]
Proverb Boka tsy enin-tsotro ka rabaho samy tsy hanana. [Rinara 1974 #949]
Proverb Boka tsy mba mihanta. [Veyrières 1913 #1994, Rinara 1974 #950, Cousins 1871 #819]
Proverb Boka tsy namosavin-kavana, hoatry ny mananasy. [Veyrières 1913 #1993]
Proverb Boka very tsy misy araka. [Houlder 1895 #2020]
Proverb Hanina azy fa toa tsy hahazo, hoy ilay boka manani-boara. [Rinara 1974 #1271]
Proverb Izay mikasika io ilay boka. [Veyrières 1913 #2003]
Proverb Mandevina endrika, toy ny boka mitanina andro. [Veyrières 1913 #2008]
Proverb Mitokan-drery toa boka. [Veyrières 1913 #2016]
Proverb Rangotra tsy nikoriana, fa nikentrona ; fa raha nikentrona izany, dia boka. [Cousins 1871 #2751]
Proverb Toy ny tandomobe sarisarim-boka. [Veyrières 1913 #2027, Cousins 1871 #3229]
Proverb Tolom-boka, ka masoandro no fetra. [Rinara 1974 #4166]
Proverb Tonta boka. [Veyrières 1913 #2025]
Proverb Tranon-takatra : izay mandrava aloha no boka. [Veyrières 1913 #116, Cousins 1871 #3271]
Proverb Tsy hita lavadavaka, hoatry ny boka misikidy rantsana. [Veyrières 1913 #2028]
Tsy hita lavadavaka, ohatra ny boka misikidy rantsana. [Cousins 1871, Houlder 1895]
Proverb Tsy mety raha manao hoe: Tsy mbola farofy aho hatrizay nahabokako. [Veyrières 1913 #2029, Cousins 1871 #3437, Nicol 1935]